မကာအိုကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကမကာအိုကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) ပေးဆောင်ရန်မအခွန်အခများနှင့်အတူတစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ passive ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကမ္ဘာတဝှမ်း Non-နေထိုင်သူကုမ္ပဏီများမှထံမှကုမ္ပဏီရှယ်ယာကိုင်ပြီးအပေါ်အခြေခံသည်။ တစ်ဦး OAC တက်ကြွကုန်သွယ်သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါ OAC ရဲ့ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်လုံးဝကျင်းပနိုင်ပါသည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်အမျိုးအစားကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအမျိုးအစားအားလုံးကိုလုပျနိုငျသော "မကာအိုကမ်းလွန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကုမ္ပဏီ" (OCC) ဟုခေါ်သည်။
OAC ရဲ့ 1999 ၏မကာအိုရဲ့ကမ်းလွန်အစိုးရအာဏာပိုင်များဥပဒေ (SAR) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ SAR တွင်လည်းတစ်ဦး OCC ကုမ္ပဏီထိန်းညှိ။ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်အပေါငျးတို့သတွေ့ဆုံအပေါ်သို့မူတည်:
1 ။ အားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းအနိုင်ငံခြားငွေကြေး (မမကာအိုငွေကြေး) နဲ့ပြုမိနေကြသည်။
2 ။ မကာအိုဒေသခံများကအဆိုပါ OAC နှင့်အတူမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြပါဘူး။
3 ။ ကျင်းပကုမ္ပဏီများမှာတည်ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်မကာအိုအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်မထားပေ။
အဆိုပါမကာအိုကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးဌာန (လျှော့ "IPIM") အားလုံး OAC ရဲ့ထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်။
မကာအိုဟာပေါ်တူဂီကကိုလိုနီတဲ့အခါမှာမကာအိုဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလေ့ရှိတယ်။ တရုတ်ပြည်မကြီး 1999 အတွက်ပေါ်တူဂီထံမှထိန်းချုပ်မှုကိုယူပြီးတာနဲ့နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မကာအိုသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့ကအုပ်ချုပ်ခံနေစဉ်, မကာအိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၏ကြီးမားသောဒီဂရီအတော်ပင်။ ဤသည်ကပြဋ္ဌာန်းသည့်လောင်းကစားခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြနေသည်။
မကာအို 2001 အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းတရားဝင်ဥပဒေလွန်။ ရလဒ်အဖြစ်, များစွာသောလောင်းကစားလောင်းကစားရုံ 2002 အတွက်မကာအိုဖွင့်လှစ်။ အင်တာနက်လောင်းကစားဥပဒ 2003 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဥပဒေများဤအမျိုးအစားများကိုတရုတ်ပြည်မကြီး၌ကြားဖူးကြသည်။ အခုတော့မကာအိုအာရှ၏ဦးဆောင်လောင်းကစားဝိုင်းစင်တာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကမကာအိုကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတော်ပင်:
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ OAC အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: OAC ရဲ့မည်သည့်အခွန်အခများပေးဆောင်ကြပါဘူး။ မှတ်ချက်: အမေရိကန်နေထိုင်သူများအချို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများကဲ့သို့မိမိတို့တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ပေးဆောင်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• ပုဂ္ဂလိက: အများပြည်သူမှတ်တမ်းများအကြိုးပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များများ၏အမည်များမပါဝင်ပါဘူး။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ: နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဟာ OAC စီမံခန့်ခွဲရန်တူညီလူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။
• အနိမ့်နိမ့်မြို့တော်: မြို့တော်အခွင့်အာဏာနိမ့်ဆုံးကအရမ်းနိမ့်သည်။
• အင်္ဂလိပ်: အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦးဘာသာစကားမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) အမည်
OAC ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအခြားမကာအိုကုမ္ပဏီအမည်များကိုတူမပြုရပါ။ တစ်ဦးကကုမ္ပဏီအမည်အားအင်္ဂလိပ်လို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ "မကာအိုကမ်းလွန်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်" ဟု OAC ရဲ့နာမ၌ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်, အအတိုကောက် "OAC" ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ IPIM အားလုံး OAC ၏မှတ်ပုံတင်ကိုင်တွယ်။ အဆိုပါ application ကိုစာရွက်စာတမ်းများ OAC ၎င်းတို့၏ရှယ်ယာများကိုရရှိထားသူတော်မူသောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ IPIM လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့သူကတစ်ဦးကမ်းလွန်အရန်ခွင့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခု OAC ဖွဲ့စည်းရန်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်နိုင်ငံကနေနိုင်ငံသားတွေရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပြီးသူတို့မကာအိုနေထိုင်ရန်မလိုပါ။ သို့သော်မကာအိုနေထိုင်သူများဖွစျလာသူနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်များအတွက် IPIM မှနေထိုင်ခွင့်အသိပေးစာတစ်ခုအပြောင်းအလဲ file ရမည်ဖြစ်သည်။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးအနည်းဆုံး OAC စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်သောရှယ်ယာရှင်သူ့ကိုသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့် OAC စီမံခန့်ခွဲရန်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သည့်နိုင်ငံကနေနိုင်ငံသားတွေဒါရိုက်တာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဒါရိုက်တာဖြစ်လာပေမည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအလောင်းတွေဆိုနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ ဌာနေဒါရိုက်တာမလိုအပ်ပါ။
ကုမ္ပဏီအရာရှိတဦး၏ချိန်းဆိုသည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တချို့ကဒါရိုက်တာတစ်ဦးကသမ္မတသို့မဟုတ်တစ်ဘဏ္ဍာရေးမှူးတစ်ခုသို့မဟုတ်အတွင်းရေးမှူးတူသောသူတဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်ကုမ္ပဏီအရာရှိများမှမိမိတို့၏အခွင့်အာဏာလွှဲအပ်ရန်ဆန္ဒရှိလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကတော့ OAC ကခန့်အပ်ထားရပါမည်။ အဆိုပါအေးဂျင့်ရဲ့ရုံးလိပ်စာ OAC ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
25,000 ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ် "Macanese အဘိဓါန် Pataca" ၏ပေါင်းလဒ်သည်မြို့တော်အခွင့်အာဏာလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 2017 ၏ဇူလိုင်လအတွက်ငွေပမာဏအနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ထက် $ 2,500 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦး OAC မဆိုကြင်နာမရှိအခွန်အခများပေးဆောင်။ ကော်ပိုရိတ်အခွန်ဝင်ငွေအခွန်, ဥစ္စာဓနအခွန်, မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, တံဆိပ်ခေါင်းခွန်, ဆုကြေးဇူးကိုအခှနျ, ဒါမှမဟုတ်အမွေဥစ္စာကိုအခှနျမရှိပါ။ အားလုံးအသစ်ကကုမ္ပဏီများကပေးဆောင်တောင်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤကင်းလွတ်ခွင့်အောက်ပါသုံးခုလိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်မူတည်:
1 ။ အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမကာအိုဒေသခံများနှင့်အတူကောက်ယူနေပါတယ်။
2 ။ အဘယ်သူမျှမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေသခံကုမ္ပဏီများနှင့်ကောက်ယူနေပါတယ်။
3 ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချသည့်အခါကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုသောဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
အများစုမှာမကာအိုကုမ္ပဏီများသည်ပထမဦးဆုံး 200,000 ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ပေါ်မှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိကြသည်။ 2017 ၏ဇူလိုင်လအတွက်, ဒီအနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ထက် $ 25,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာပမာဏ။ အောက်ပါ 100,000 ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်တစ် 9% အခွန်နှုန်းကိုချေ။ ကြောင်းပမာဏကိုပြီးနောက်အခွန် 12% မှာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအများစုကသူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်ရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေအခွန်ပါဘူးစဉ် Worldwide မှဝင်ငွေမကာအိုအားဖြင့်အခွန်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ OAC မကာအိုအတွက်န်ထမ်းအဖြစ်ဒေသခံများငှားရမ်းနေလျှင်န်ထမ်းဟာသူတို့ရဲ့လုပ်အားခတခုတခုအပေါ်မှာဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မကာအိုမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဝေးလံသောအလုပျသမားသူတို့ရဲ့လစာသို့မဟုတ်လျော်ကြေးအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
နောက်ထပ်ဝင်ငွေအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် OAC ရဲ့သူတို့ရဲ့ Non-နေထိုင်သူမန်နေဂျာများနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပတ်သက်. အဘို့တည်ရှိကြောင်း။ ပထမဦးဆုံးနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ဤအန်ထမ်းမဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခွန် (လုပ်အားခအခွန်) ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ နိုင်ငံခြားရေးမန်နေဂျာများနှင့်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများသည်ဤကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက်မကာအိုဥပဒေရေးရာနေထိုင်သူများဖြစ်လာရပေမည်။
နှစ်အလိုက်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအဆိုပါ IPIM အားလုံးဝင်ငွေ၏သတင်းရင်းမြစ်အတည်ပြုနဲ့အတူတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့မကာအိုမှမဟုတ်ခဲ့သညျ။
အဆိုပါအကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ '' အမည် OAC မှတ်ပုံတင်ပေါ်မှာ IPIM နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့၏အမည်များကိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမထားပေ။
တစ်ဦး OAC မှတ်ပုံတင်တစ်လပုံစံအတည်ပြုချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, privacy ကို, ပြည့်စုံအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်များ၏အနည်းဆုံးနှင့်အတူတူပင်လူတစ်ဦး, ခွင့်ပြုအင်္ဂလိပ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တစ်ဦးအနိမ့်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်: တစ်ဦးကမကာအိုကမ်းလွန်အရန်ကုမ္ပဏီ (OAC) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။